by pamusoro 18-08-23
HVAC inoda unogona kuva nechokwadi chokuti uri kuwana unhu zvinhu uye risingaenzaniswi basa. Our Air Conditioning contactors uye relays achakubatsira HVAC kudzora enyika.
From Stylish haizoshandisi uye zvigadziko, kuti vakarongeka musha kudzora mhinduro, kutsanya-kuchaja emagetsi motokari ndiro, isu kununura itsva kwevari utsanzi uye nyore. Nofuel kunovimbisa upenyu iri misha uye madiki.
Chizvarwa chose mutsva redunhu namapoporodzi, contactors, zadzisa relays uye mutoro vanongodya neurefu hwakasiyana nomwe kusvika 250. KW zvagadzirirwa kushandiswa mune Panel pamwe modular kugadzwa izvo Panel Kuvaka nyore. Yemakwikwi kuzvidzora ukomba nokuti North America musika pamwe Ul 508 uye Ul 1077 kusangana UL5 ...
Electrical Protection uye Control
NM1 wedu Series MCB ane nzira itsva, akangwara, basa, uye hwakavimbika pasi-voltage simba kugovera hurongwa. Ino kwakakwana ndiko scalable uye simba-rikurumidze, kukupai waivako zvaunoreva. For nemabhizimisi kuti kuvimba magetsi, chichiitwa richiona nezvezvabuda midziyo yemagetsi ...
Nofuel EV ndinorova pfungwa kushandiswa zvose rokupaka runyararo: mahofisi, hotels, muzvitoro, fleets, municpals, etc.and EV Charging wallbox wedu Charging kudzivirirwa zvinoriumba It saka inogona kushandiswa oma runyararo: mudzimba uye paunenge zvivako (condominium, chepamusoro motokari Park, Hote ...
Tine akasiyana vakasarudzwa contactors, zadzisa relays, injini Mutange, Pilot mudziyo uye kuchinjwa haizoshandisi kuti gwenya kudzora kubva 3hp kuti 600hp @ 480V 7a-800A AC-1, AC-3 3phase, 4 Pasika, AC12V kuna AC 660V, DC12V kuna DC440V siyana chikumbira kusangana indasitiri yako chaiyo kushayiwa. zvinhu zvedu ...
Inoshumira yose chigadzirwa, maitiro uye mhinduro mabhizimisi kuti simba kugoverwa kwezvivako yokugara, ezvokutengeserana, maindasitiri uye utility pamisika. The Kupesana inopa navanopinda-siyana Portfolio simba kuparadzirwa uye dunhu nedziviriro zvigadzirwa, kufukidza siyana kubvira 120 V kusvika 24 KV ....